Gnome 3.6 oo lagu sii daayay astaamo iyo horumarin cusub | Laga soo bilaabo Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Muuqaal / Shakhsiyeyn, Noticias
Isticmaalayaasha Gnome Nasiib ayaad ku jirtaa, maxaa yeelay nooca 3.6 ee Degaankan loo yaqaan 'Desktop Environment' ayaa aakhirkii la sii daayay, iyada oo horumar badan la sameeyay, cilladaha cilladaha iyo astaamaha cusub.
Sida laga soo xigtay ogeysiis rasmi ah, waxaan yeelan doonaa astaamo cusub. Ogeysiisyada ayaa helay horumarin weyn, oo ay ku jiraan saxaarad fariin dib loo qaabeeyey, ogeysiisyo caqli badan, iyo dib u habeyn iyo hagaajin kale. Hawlaha oo kooban (Guudmarka) Waxaa sidoo kale lagu hagaajiyay shaqooyinkeeda iyo qaabeynta labadaba.
files - maareeyaha faylka- Sidoo kale waa la hagaajiyay (sida ay iyagu yihiin ¬_¬) haddana faylka raadintiisu waa ka sii shaqeynaysaa, shaqeynta cusub ee Faylasha Dhawaan iyo interface-ka ayaa helay xoogaa hagaajin ah oo ku saabsan qaabeynta. Waxaa sidoo kale jira tan oo ah hagaajinta cilladaha iyo astaamo cusub oo faa'iido leh.
Hadda gelinta nooc dabeecado kala duwan (tusaale Jabbaan ama Shiine) ayaa ka dhaqso iyo fudeyd badan. Astaamaha marin-u-helka Universal sida akhristaha shaashadda 'Orca' ayaa lagu hawl gelin karaa badhanka riixista.
Gnome 3.6 wuxuu leeyahay shaashad quful cusub. Tani waxay bixisaa aragti soo jiidasho leh marka qalabku xiran yahay, marka lagu daro shaqeynta gacanta sida kontaroolada warbaahinta iyo ogeysiisyada.
Waxaa jira horumarro kale oo badan oo ku jira Gnome 3.6, oo ay ku jiraan taageerada Xisaabaadka internetka waayo, Microsoft Exchange, Facebook y Windows Live. Dejinta nidaamka si weyn ayaa loo hagaajiyay oo menu-ka isticmaalaha ayaa dib loo habeeyay sidoo kale.
Codsiyo badan oo ka mid ah GNOME sidoo kale waxay heleen horumar, ay ka mid yihiin Web, Naxariis, el Falanqeeyaha isticmaalka diskka iyo Font Viewer. Siideyntaan sidoo kale waxaa kujira sii deyntii ugu horeysay ee weyn ee Sanduuqyada (Khaanadaha), codsi loo isticmaalo nidaamyada fog iyo mashiinnada dalwaddii, iyo horudhac horumarineed ee Barnaamijka saacadda lagu heli karaa nooca 3.8.
Waxaad ka akhrisan kartaa dhammaan isbeddelada ku jira GNOME 3.6 at qoraalada sii deynta. Akhriso war-saxaafadeedka xiriirka hoose: GNOME 3.6 Taariikhda Siideynta: Evolution in Sameynta.
Halkan waxaa ku yaal sawir leh sawirro dheeri ah oo ku saabsan sida ay u egtahay Gnome 3.6
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Gnome 3.6 oo lagu sii daayay astaamo iyo horumarin cusub
Runtu waxay tahay inay igu adkayd inaan fahmo muuqaalka Gnome Shell inkasta oo ay leedahay cillado badan hadana waan la qabsaday laakin maanta wax dhakhso ah kama heli karo laptop-ka. Kombiyuutarka kumbuyuutarka waa sheeko kale oo ka duwan ...
Aynu aragno haddii ay u soo ridaan goobaha keydka Arch, waan samrayaa!
Jebiya kubbadaha Ionut 😉
Sida had iyo jeer yiraahdaan, dhadhanka midabka.
Run ahaantii waxaa jira waxyaabo badan oo ay tahay inay horumariyaan, guud ahaan waa mid ka mid ah, waxaan dhihi karaa, waxay sameyn karaan ciyaaryahan waxqabad badan leh. Midda kale waxay noqon doontaa in la sameeyo shaashad desktop ka qurux badan oo aan waqti badan luminin websaydhka / epiphany, laakiin laga walwalo kuwa wanaagsan, xasilloonida, buuq iwm
Waad saxantahay Totem waa tan ugu xun ee jirta. Runtii ma aqaano sababta ay ugu dhibtoonayaan inay ku daraan haddii qof walba uu ku dhameysto rakibidda qof kale. Waxay u egtahay ciridka xayawaan qiisuhu ku dhegan yahay kabihiinna.
Hahaha, isbarbardhig aad u wanaagsan.
Ku jawaab k301
Weli ma jecli Gnome Shell, laakiin waxaas oo dhan ka sarreeya, naafaynta lagu sameeyay Nautilus waxay u muuqataa qalad. dhanka xasiloonida miyayna horay u xalin jireen arinta mudo kordhinta ???
Mint13 dhexdeeda waxaan ka helay Nemo 😐… xD
Sababtoo ah walaashay waa qof aad u taageereysa qolofka Gnome sii deyntaani way jeclaan doontaa 🙂
Sida la filayo gnome 3.6 waxay la soo baxaysaa waxyaabo yar yar oo runtii ka maqan tahay. Totem sida ku xusan tariikhda ayaa laga shaqeyn doonaa sii deynta soo socota (3.8) runtiina waxaan rajeynayaa inay wax uun ku qabtaan maxaa yeelay waxay haysataa waqti ku filan oo la qaboojiyey isla (inkasta oo si fiican loo qaabeeyey oo loo adeegsado koodhadhka ay sameyso wixii la rabay inay sameyso) : ciyaaro multimedia). Marka laga hadlayo nautilus, runtu waxay tahay in astaamaheeda qaarkood laga yaabo in laga qaaday, laakiin jagooyinka ama ku daristu waa fiican yihiin hadaad runti taqaanid sida looga faa'iidaysto. Sidii aan uguqoray tabarucaad maalmo kahor, gnome waa jawi shaqo oo wanaagsan, si buuxda u shaqeynaya kana sareysa wax qabad kasta, oo ah miisaan dhexdhexaad ah (marka loo barbar dhigo kuwa kale ee ka culus oo ka qurux badan ama iftiinka iyo soo jiidashada leh) ee sameeya wixii loogu talagalay inay sameyso miiska. Anigana waxaan ku isticmaalaa kumbuyuutarkeyga laptop-ka iyo kan desktop-ka waxayna igu shaqaysaa waxyaabo yaab leh.
Jawaab Jorge Manjarrez Lerma
Si tartiib tartiib ah ayuu wax u kasbadaa. Deegaan kasta wuxuu leeyahay qol lagu hagaajiyo iyo Gnome 3 looooong… Qaar badan ma jecla fudeydka waana jeclahay oo qaybaha kala duwan ayaa sifiican iskula jaan qaada. Hore ayaan ula qabsaday Shell waxbana ugama beddelo. Maxaa ku saabsan kordhinta? Haddii ay ku jiraan shabakadda Gnome ujeedadaas, si otomaatig ah ayaa hadda loo cusbooneysiiyaa. Waa midka kaliya laakiin waqtigaan la joogo Gnome 3 Shell, arinta sababta ay ugu kala jabayaan nooc kasta. Haddii ay yihiin kordhinno fudud waa inay had iyo jeer shaqeeyaan. Laakiin haye, waxaan isku dayaa inaan isticmaalo sida ugu yar ee suurtogalka ah anigoo raacaya wadada fudud.
Oops Gnome-kaani wuxuu umuuqdaa mid heer sare ah, minimalism wuxuu leeyahay xarrago iyo gnome ayaa ka dhigaya mid wanaagsan.
XIISO XIDHIIDHKA POST. KADHASHADA SIDA LACAG LA'AAN AH AYAA DHUL GALAY. FIKIRKA ISTICMAALKA QEYBTA LINUX WAA QUUL JOOG HADA HADDANA LAGU QAADO IN AAN ISTICMAALO MID. Waxaan jeclaan lahaa inaan ka caawiyo anigoo tilmaamaya waxa weeye ee aan isticmaali karo madaama aan ku talojiray waxbadan sawir gacmeed, PINACLE STUDIO, BORLAND ayaan uga shaqeeyaa C ++ mana aqaano hadii waxaas oo dhami la jaan qaadayaan LINUX. WAAN SUGI DOONAA.
isticmaal madasha kalluunka, si dhakhso leh ayey uga soo qaybgalaan halkaas
Waxaan kugula talin lahaa wareejinta fedora ee naqshadeeyayaasha ama wax ka dhameystiran sida UbuntuStudio, anigu waxaan ahay naqshadeeye waana jeclahay wixii lagu sameeyay gnome, gaar ahaan cadee Gnome3.6 ee LiveCd waan jeclahay, waxaan rajeynayaa inay timaado maxaa yeelay runta ayaa qurux badan oo shaqeynaya
Ku jawaab Gibran
markasta oo ay fiicnaato, waan sugi doonaa hada markay fedora 18 soo baxdo.
Waa hagaag, waan ku faraxsanahay nolosha, wax dhibaato ah ma qabanayo, markii boodboodka noocaas ah ee 'muranka badan leh' uu dhacay waxaan dareemay wax yar oo wareer ah markii hore maxaa yeelay waxay ahayd isbeddel xoog leh, laakiin halkii aan naftayda ugu hibeyn lahaa dhaleeceynta ama tuurista tusaalayaasha waxaan ahaa la qabsiga iyo raadinta faa'iidooyinka deegaankan desktop-ka ah maantana waxay ku sii jirtaa midka aan ugu jeclahay Arch Linux. Dhanka kale, waxaan isku dayay KDE, Xfce waana cajiib laakiin waa Gnome waxaan dareemayaa sida kalluun biyo ku jira sida qoraa aan la aqoon ayaa yiri: "Quruxdu waxay ku jirtaa indhaha qofka arka", iyadoon dadka kale laga dhimayn Gnome wax badan ayaan qabtaa markaan shaqeynayo, waxaan ugu hagaajiyaa sida aan jeclahay. Ku saabsan Nautilus iyo xulashooyinka ay dad badani dhahaan waa la cabudhiyay maxaa yeelay sidaas maahan, xulashooyinkan hadda waxay ku jiraan badhan halkii laga heli lahaa gabi ahaanba xulashooyin si loo badbaadiyo booska ... waa intaas.
Xukun wanaagsan, taasi waa inay noqotaa dabeecadda.
Xaaladdayda, markii KDE ay u boodday nooca 4 waxaan u fududaaday, waxay ka soo bilaabatay xoq, dhibaatooyinkana waa la filayay.
Qaar ka mid ah "Taalibaan" ayaa ka faa'iideystay fursaddooda waxaana u adkaystay dhaleecayn cayn kasta ah. Laakiin waqtigu wuxuu qof walba dhigay booskiisa, KDE halka ay mudan tahay iyo "baabbi'iyeyaasheeda" sidoo kale.
Si aad ugu rakibto GNOME 3.6 gudaha OpenSUSE 12.2 si aad u fudud, la tasho maqaalkan: http://www.guiadelcamaleon.blogspot.com.es/2012/09/como-instalar-gnome-36-en-opensuse-122.html.
Ku jawaab toniem
Sameynta gnome fudeyd kama dhigeyso howlaha ama uma qarineyso sida waxa ay sameynayaan. Marwalba waan jeclaa gnome inaan ka fududyahay kde (kde waa desktop weyn oo aad u fudud in la habeeyo), waxaan u maleynayaa waxa kaliya ee ay ku guuleystaan ​​inay tahay inaan ka wada hadalno inta udhaxeysa isticmaaleyaasha isla markaana aan ka cabsi galino isticmaaleyaasha cusub. Runtuna ma aqaano waxa ku dhaca madaxyada kuwa horjooga mashruuca gnome, wax lacag ah kuma fadhido si ay u sameeyaan isticmaalayaasha dhamaadka ayaa ka tagi kara tusaale ahaan: nautilus waxyar oo raaxo leh in la isticmaalo iyo gnome- guddiga. Farxad
Waan jeclahay GNOME Shell, gaar ahaan Fedora!
Laakiin hadda ma isticmaalo qolofka, waxaan isticmaalaa qorfe, kaas oo isku mid noqon doona 🙂
[Cusub] OpenArena Server